६० लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित, सर्वोत्तम सिमेन्टको विशेष साधारणसभाबाट - जन आवाज
आईपीओशेयर बजाररुरु जलविद्युतनेप्सेतेह्रथुम पावर कम्पनीसानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स
६० लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित, सर्वोत्तम सिमेन्टको विशेष साधारणसभाबाट
शुक्रबार ११ असार, २०७८
बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको आज विशेष साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौको तीनकुनेस्थित न्यौपाने टावरमा आयोजित विशेष साधारणसभाले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो।
सभाले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीबीचको पुँजी अनुपात ८७.१०ः१२.९० हुने गरी मिलान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसरी सेयर संरचना परिवर्तनपश्चात कम्पनीले ६० लाख कित्ता सेयरको बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो।
सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रस्ताव गरिएको हाय कायम चुक्तापुँजी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कुल २०.१२४ प्रतिशतले हुन आउने लाभांश पनि अनुमोदन गरेको छ। जसमा १९.११८ प्रतिशत बोन सेयर र १.००६ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) रहेका छन्।
मंगलबारबाट कारोबारमा आउने भयो आँखु खोला हाइड्रोपावरको शेयर
१३ लाख ८८ हजार कित्ता आइपीओ आउदै, बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य समायोजनपछि सेयरभाउ कति ?
आज अन्तिम दिन सामलिङ्ग पावरको आईपीओमा आवेदन दिने
आईपिओ निष्काशन गर्दै विकास हाइड्रोपावरले, कित्ता कती ?
यूएईमा विदेशीलाई सबै प्रकारका भिसामा प्रवेश अनुमति
सेयर बजारमा नकारात्मक सर्किट : ४० मिनेटका लागि कारोबार बन्द